कोरोनासङ्ग ल’डिरहेका हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले दशैको मुखैमा लेखे यस्तो मनछुने स्टाटस ! – Life Nepali
कोरोनासङ्ग ल’डिरहेका हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले दशैको मुखैमा लेखे यस्तो मनछुने स्टाटस !
वरिष्ठ हाँस्यकलाकार हरिवंश आचार्यले को रोना सं क्रमित भइसकेपछिको आफ्नो अ नुभव सुनाएका छन्। उनले शुरुमा को रोना लाग्नबाट ड’राउन र लागिसकेपछि न’डराउन सुझाव दिएका छन्। यति गर्न सकेमा को’रोनाबाट मुक्त हुन मनोवल बढ्ने उनले बताए। युवाहरुको समूह गठित कम्पासले को भिडको आगमन र बहिर्गमनको विषयमा शनिबार गरेको कार्यक्रममा कलाकार आचार्यले को रोनालाई सामान्य रुपमा नलिन सबैसँग आग्रह गरे । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्*** .,
‘यो वर्षको दसैंमा टीका थाप्न म कसैको घरमा पनि आउँदिन, तपाईंहरु पनि कोही पनि मेरो परिवारमा नआउनुहोला’, उनले भने, ‘कोरो नाबाट बच्नका लागि हामी आफूले आफूलाई नै मन्दिर सोचौं, आफनो घर नै मन्दिर सोच र आआफ्नै घरमै बसेर दशैं मनाऔँ।’
को रोना पोजे टिभ रहेका आचार्यले दशैं दशा हुनेतर्फ विशेष सतर्क रहन आग्रह गरे । उनले आफू बच्ने मात्रै होइन, अरुलाई को रोनाबाट बचाउनु पनि आफ्नो दायित्व सम्झन आग्रह गरेका छन्।यो वर्षको दशैं बाँच्ने उत्साहको रुपमा लिन उनले सबैसँग आग्रह गरे ।
‘हामी बाँचिराखे दशैं अर्काे वर्ष पनि आउँछ, भगवान हामीसँगै रहन्छन्’, उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरी दसैंमा यताउती नजानु होला, को रोनासँग जोगिनु अहिलेको प्रमुख काम हो।’आफूलाई को रोना लागेको शनिबार १३ दिन भएको उनले बताए।‘आज आइतबार टे ष्ट गर्ने योजनामा छ। आजको टे स्टबाट म र श्रीमती दुवै को रोनामुक्त हुने विश्वास छ’, उनले भने । ***यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् **
Previous लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज आइतबार पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो !
Next डिउटीबाटै २ प्रहरी वे’पत्ता, एक प्रहरीको श’व यस्तो अ’वस्थामा भेटियो !